July 2019 - Page2of2- CeleLove
သမီးလေး ဗစ်တိုးရီးယားအမှုကဆရာမနှင်းနု ပျောက်နေတာနဲ့ဒီတိုင်းပြီးရမှာလား …?
သမီးလေး ဗစ်တိုးရီးယားအမှုကဆရာမနှင်းနု ပျောက်နေတာနဲ့ဒီတိုင်းပြီးရမှာလား …? #နှင်းနု ကပျောက်တာမဟုတ်ဘူး ! #ဖျောက်ထားတာ … ဒဲ့ ထပ်ပြောမယ် ! ပြည်ထဲရေးကားနဲ့ မန္တလေးဘက်ကို ခေါ်သွားတယ် …။ ရှင်းရှင်းပြောရရင် မီဒီယာတွေ ဒီတခါမေးမြန်းတာခံရရင် ပြည်ထဲရေးလိမ်နေတာတွေ အစထွက်မှာစိုးလို့အောင်ဝင်းခိုင်ကို အစဖျောက်သလို ဘယ်သူမှမတွေ့နိုင်တဲ့နေရာကိုပို […]
ပဲနို့ဗူး ၀ယ်သောက်တတ်တဲ့ ကလေးတွေ ဆင်ခြင်ဖို့ပါ .. “ဘုရား ဘုရား ကြောက်စရာကောင်းလိုက်တာ သူနာပြု ဆရာမလေးတယောက်တင်ပြထားတာကို ဖတ်ပြီး အားလုံး ဆင်ခြင်ကြပါစေရန် …. တင်ပြပေးလိုက်ပါတယ်နော် …. ။ ထိုင်းနိုင်ငံထုတ် ပဲနို့ဗူးတွေပါ မြေးအဖွားနှစ်ယောက်အတူတူသောက်တဲ့ပဲနို့က ရက်မလွန်ပါဘူးဒါပေမဲ့ပဲနို့အနည်းငယ်ခဲပြီးချဉ် နေတာသောက်မိပြီးအစာဆိပ်သင့်ပြီးသတိလစ်ပြီးဆေးခန်းကိုရောက်လာလို့ဆေးရုံကိုပို့လိုက်ရပါတယ်တဲ့ ချဉ်ပြီးခဲနေသော နို့ဗူးများသောက်ပြီး […]
ရှေ့တန်းပြန်လာတဲ့ သားသုံးယောက်ရဲ့ SUPRISE လုပ်မှုကြောင့် မျက်ရည်ကျမိတဲ့ မိဘနှစ်ပါး…
ရှေ့တန်းပြန်လာတဲ့ သားသုံးယောက်ရဲ့ SUPRISE လုပ်မှုကြောင့် မျက်ရည်ကျမိတဲ့ မိဘနှစ်ပါး… သားသမီးနဲ့ မိဘ နယ်မြေခြားဝေကွာနေရင်တောင် မိဘတွေမှာ စိတ်ပူပြီး သားသမီးပြန်အလာကို အမြဲစောင့်မျော်နေတတ်ပါတယ်။ ယခုလို ရှေ့တန်းသွားနေရတဲ့ သားသမီးတွေအဆို မိဘတွေက သူတို့ဆီကို အမြန်ဆုံးပြန်လာဖို့ ဘယ်လောက်တောင် မျှော်နေမိမလဲ Lifestyle_Myanmar ပရိတ်သတ်ကြီးပဲ စဉ်းစားကြည့်ကြပါ။ ယခုအဖြစ်အပျက်လေးကတော့ […]